Kungani i-Right Kitchen Faucet Yenza Umehluko
Ikhaya / Blog / Kungani i-Right Kitchen Faucet Yenza Umehluko
2020 / 11 / 09 UkwahlukanisaBlog 10234 0
Kunzima ukubona lokho okulahlekile uze uphendukele komunye ompompi abaphambili bekhishi. Kunezinhlobo eziningi kakhulu, kusukela ekusebenzeni kokuthinta kuya kompompi benzwa yokuhamba. Ungathola ompompi ezinhlobonhlobo zemiklamo ehlukene, futhi ungathola nesifutho sokudonsa noma sokukhipha ngokuncamela isifutho sesici.
Ukuthepha okulungile kungenza inqubo yakho incane kakhulu nesikhathi osichitha ekhishini lakho uzijabulisa ngokwengeziwe. Uma udinga ukuthepha kwekhwalithi ephezulu, kufanele uhlale ufunda ukuhlolwa ngaphambi kokuyithenga. Amakhasimende angahle abe mabi futhi avuleke kahle mayelana nolwazi lwabo ngemikhiqizo.
Noma ngabe uthenga amapayipi ompompi basekhishini webronze ogaywe ngamafutha abiza amadola angamakhulu noma umane ufuna enye indlela efanelekile, ukubuyekezwa kungasiza. Le yindlela ephathekayo eyodwa yokunciphisa umpompi ongakwesokudla. Njengoba kungewona wonke umuntu oyingcweti kumpompi basekhishini, kuyisilinganiso sokuqala sokubamba izinto ezimbalwa ofuna ukuzisesha. Funda eminye imininingwane lapha mayelana nalokhu noma matte black donsa phansi umpompi wasekhishini.
Amandla ofuna ukuwathola kumpompi wakho omusha wasekhishini
Ukwakhiwa kwethusi okugcwele
Lokhu ngokujwayelekile manje akuyona inkinga uze ukhethe ithephu enentengo yangempela. Oompompi abaningi benziwa ngethusi ngenxa yokuthi abasagqoki njengamatshe ahlukile lapho behlangana namanzi. Lokhu kuqhubeka ompompi wakho isikhathi eside futhi uthola okwengeziwe ngemali oyisebenzisayo. Imikhiqizo efana neDelta, iMoen, iKohler, iDanze, nokuningi kokusebenzisa ithusi kompompi bayo.
Isizukulwane sakamuva siza nonompompi abaningi abahlukile, kepha izinkampani ezimbalwa zisalele ngemuva. Udinga ukuqinisekisa ukuthi uthola inkathi ekusebenzela kahle. Uma uthatha isinqumo ngompompi wenzwa yokunyakaza, ungayithola kalula ekhishini lakho. Kodwa-ke, njengoba lokhu kungabiza kakhulu, udinga futhi ukukhumbula ubuchwepheshe bokuthinta njengoba bufana kakhulu futhi bunikezwa phakathi kwezinzuzo ezilinganayo.
Enye into ofuna ukuyiqinisekisa ubuchwepheshe obuhle be-valve. Amaphayiphu yizinto ezingaba yisilinganiso esiphezulu esifakwa kumpompi wasekhishini, futhi ama-ejensi ambalwa afana neDelta ahlinzeka ngobuchwepheshe obuqinisekisa ukuthi ama-valve akho anempilo yezicelo ezingaphezu kwezigidi ezi-5. Ompompi abaningi basebenzisa izinhlobo ezimbalwa zama-valve e-ceramic, futhi udinga nje ukuqiniseka ukuthi yakhelwe impilo ende.
Isiphetho nompompi kufanele kufakwe ngengubo ngesiqinisekiso sempilo evaliwe, kunoma yikuphi okunye kungenzeka ungatholi umpompi omangalisayo. Isici sokuvala osidingayo ukusifaka esikhundleni sonyaka noma emibili. Ompompi kufanele bavale okungenani iminyaka emihlanu, kuya ngokuthi ubahlukumeza kangakanani, futhi akufanele wesabe cishe ukushintsha umpompi wakho iminyaka eminingi.
Ungakhawulela kanjani ukukhetha kwakho
Uma ubheka izinhlobo eziningi zompompi, ungathola ukuthi yini oyithandayo ngobuqotho nokuthi yini ongayithandi. Ngeke bonke benze okulingana futhi akusekho ukuthi bonke ompompi bakhiwe ngokufana. Eminye imikhiqizo ibhekwa njengephakeme kuneminye, futhi uma ufuna okungcono, uzimisele kangcono ukwenza imali ngenxa yokuthi kungenzeka ingabi eshibhile.
Kodwa-ke, ukuyekethisa kompompi onentengo ephezulu kunikeza izinzuzo ezinkulu nomkhiqizo omuhle kakhulu. Akufanele ukhathazeke cishe ngalokhu kwehla okucasulayo njengoba ompompi bezinga lokuqala benziwa besebenzisa ubuchwepheshe obungasebenzisi i-drip. Enye into oyitholayo ngenkathi ukhokha okuthe xaxa ngompompi ofanele ngamakhono athe xaxa. Lokhu kungafaka izinto eziningi ezahlukahlukene kuye ngompompi owukhethile.
Qiniseka ukuthi awukhethi kahle ompompi omangalisa kakhulu, kepha futhi yilowo obonakala umuhle kakhulu futhi usebenza kahle. Njengoba ungeke uyihlole kuqala, kuzodingeka uqiniseke ukuthi ixhumeke kahle uma wenze ukhetho olubi. Uma ufunda ezinye izibuyekezo ngaphambili, ngeke ukwazi ukwenza ukukhetha okungalungile kumpompi wakho omusha wasekhishini.
Edlule :: Izinto ezi-5 ezenza ipayipi elikhulu lekhishi Olandelayo: Ungawashintsha kanjani ompompi basekhishini?
Ubusika Bulapha! Ingabe Kufanele Ngithenge I-Shower Thermostatic? Lalela Ochwepheshe, Cha ...
2021 / 01 / 15 820
2021 / 01 / 11 1178
2021 / 01 / 11 891
2021 / 01 / 11 1017
2020 / 12 / 12 4284
2020 / 12 / 12 3621